भागरथीको श*व भेटिएको ठाउँमा पुग्दा हेर्नुहोस् , बाटोको छेउमै यस्तो भयो ? अन्त मा*रेर त्यहाँ फाले ? – Onlines Time
February 9, 2021 February 14, 2021 onlinestimeLeaveaComment on भागरथीको श*व भेटिएको ठाउँमा पुग्दा हेर्नुहोस् , बाटोको छेउमै यस्तो भयो ? अन्त मा*रेर त्यहाँ फाले ?
सडकमा नारा लगाउँदै जुलुसमा हिँडिरहेका मानिसहरूले सहरको प्रतिनिधित्व गर्दैनन् । कसलाई फुर्सद छ र सहरमा यसरी जुलुसमा हिँड्न ? गाउँबाट पैसाका लागि आएका भाडाका मानिसहरू र विदेशीको पैसाको आडमा चलेको ‘पेड’ आन्दोलन हो यो । झ्यालबाट नियाल्दै सहरले सोच्ने यस्तै–यस्तै हो । यो सोचमा अडिग छ सहर । हरेक जनआन्दोलनको जुलुसलाई झ्यालबाट नियालेर यस्तै आरोप लगाएको छ सहरले । भाटभटेनीको सडक–सभामा प्रतिगमनको विरोध गरिरहेका युवालाई नियालिरहेका थिए, नजिकैको फिटनेस सेन्टरबाट केही युवा । उनीहरू शरीरको तन्दुरुस्तीका लागि स्किपिङ र ट्रेडमिलमा ‘जगिङ’ गरिरहेका थिए । सडकमा चलिरहेको सभा उनीहरूका लागि फगत फुर्सदिला ‘पाखे’हरू र एनजीओको पैसामा जम्मा भएकाहरूको भीड हो ।
सडकमा मार्च गर्ने युवा, पानीको फोहराको झट्का खाने युवा, सडकमा प्रहरीको लट्ठी खाने युवा र झ्यालबाट नियालिरहेका पनि युवा । सबै यही देशका युवा नै हुन् । पढेलेखेका र होनहार । यी युवाको सोचमा यत्रो भिन्नताचाहिँ किन होला ? किन ती झ्यालबाट नियालिरहेका युवा सडकमा अधिकारका लागि उर्लेका युवासँग मिसिन चाहँदैनन् ? किन रमिते नै रहन चाहन्छन् उनीहरू सधैं ? प्रश्न गम्भीर छ । तर उनीहरूसँग सहज उत्तर छ­ ‘राजनीति फोहरी खेल हो’ । राजनीति फोहरी खेल हो भने यसलाई सफा बनाउने जिम्माचाहिँ कस्को त ? पढेलेखेका, सचेत, समझदार, जेहेनदार युवाहरूकै त हो ।